DHAGEYSO Shirka hogaamiyeyaasha Maamul goboleedyada Soomaaliya oo malainkii labaad ka socda magaalada Kismaanyo. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Shirka hogaamiyeyaasha Maamul goboleedyada Soomaaliya oo malainkii labaad ka socda magaalada Kismaanyo.
Magaalada Kismaanyo ee xarunta gobolka Jubada Hoose dalka Soomaaliya waxa maalintii labaad ku shirsan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya sidoo kale waxaa shirkaasi ka qayb galaya wakiilka gaarka ah ee QM u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya Micheal Keating.
Shirkaan oo shalay furmay ayaa waxaa khudbado ka jeediyay hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya waxayna dhamaantood eedaymo u jeediyeen dowlada dhexe oo ay waxyaabo kala duwan ku dhaliileen.
Madaxda maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo kulanka ka hadlay waxay sheegeen inaysan dowlada dhexe ka taageerin Ciidamo ay maamul goboleedyadu tababarteen si ay ula dagaalamaan ururka AL-shabaab.
Dhanka kale waxaa jira eedaymo loo jeedinayo madaxda maamulada Soomaaliya oo ku aadan inaysan iyaga qudhoodu ka soo bixin waxyaabihii loo egmaday.
Xildhibaan Idiris Abdi dhaqtar oo ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya ayaa madaxda maamulada ku eedeeyay in doonayaan waqtiyo dheeraad ah ayadoo dhanka kalena deegaanadooda qaarkooda y ka jiraan dhibaatooyin uu amaanku ka mid yahay.
← Guddoomiyaasha ismaamulada oo ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo canshuurta shidaalka
Mevlut Cavusoglu discusses Syria with Mike Pompeo on phone →